Khilaafka iyo Colaada Puntland iyo Somaliland oo cirka isku sii Shareertay (Daawo)
May 28, 2018 - Written by Editor
Gudiga Difaaca Puntland ayaa maanta Shirjaraa,id waxay ku qabteen magaalada Garowe ee xarunta dawlada Puntland waxaana ay eedeyn kulul u soo jeedsheen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi .
Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland Cabdilaahi Jamac Xirsi Timacade ayaa u mahadceliyey qaybaha bulshada ee kusugan Gobolka Sool sida ay u muujiyeen rabitaankooda .
Wasiirka Amniga Puntland ayaa isna si weyn u mahad celiyey doorkii Ciidanka Puntland ka qatay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tuka-raq.
Dhanka kale Afhayeenka Madaxtooyada Puntland ayaa fariin u diray shacabka ku dhaqan gobalka Sool wuxuuna ugu baaqay in ay gunimada ogalaan isaga oo ku boorinaya in ay la dagaalaan ciidamada Somaliland.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cumar Camey oo goor dhaw la hadlay warbaahinta dawladda PuntlandTV ayaa sheegay in dagaalka ka dhex curtay Somaliland iyo Puntland uusan joogsan doonin inta xuduuda Puntland la sugayo lagana saarayo ciidamada S/land.
Khilaafka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland ayaa maalinba maalinta ka danbeeya sii xoogeysanaya waxayna labada Maamul indhaha ka qabsadeen baaqyada ay waxgaradka culumada iyo madaxada DFS ay soo saareen kaas oo ku baaqayey in la joojiyo Colaada Tuka raq iyo dagaalka lagu daadinayo dhiiga dadka Muslinka walaalaha ah .
272,551 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress